Qiimaha Lufthansa wuxuu ku dhow yahay inuu ku kordho US $ 2.5 bilyan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qiimaha Lufthansa wuxuu ku dhow yahay inuu ku kordho US $ 2.5 bilyan
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Investments • News • Gaadiidka
Lufthansa waxay kasbatay lacag dheeri ah suuqa caasimada
Guddiga Fulinta ee Deutsche Lufthansa AG ayaa maanta, iyada oo oggolaansho ka heshay Guddiga Kormeerka Shirkadda, waxay go'aansadeen in ay u adeegsadaan Raasamaalka C ee la kordhiyey raasumaalka xuquuqda lahaanshaha ee saamileyda Shirkadda. Raasamaalka Shirkadda ee hadda ah 1,530,221,624.32 EUR, oo loo qaybiyey 597,742,822 saamiyo, ayaa la kordhin doonaa iyada oo la soo saarayo 597,742,822 saamiyada cusub ee aan qiimaha lahayn ee Shirkadda.
Bishii Juun, eTurboNews ayaa sheegayku saabsan qorshaha ay samaysay Jarmal Lufthansa Airline Plan of Capital ah.
Dakhliga guud ee soo xarooda ayaa la filayaa inuu noqdo 2,140 milyan oo EUR. Qiimaha rukunka ee EUR 3.58 halkii Saamiga Cusub waxay u dhigantaa qiimo dhimis dhan 39.3% TERP (qiimaha xuquuqaha hore).
Saamiga rukunka waa 1: 1. Saamiyada cusub waa in la siiyaa saamilayda Shirkadda inta lagu jiro muddada diiwaangelinta, oo la filayo inay bilaabato Sebtember 22, 2021 waxayna dhammaan doontaa Oktoobar 5, 2021.
Ka ganacsiga xuquuqda ayaa la filayaa inuu bilaabo 22 -ka Sebtember, 2021 -ka wuxuuna dhammaanayaa Sebtember 30, 2021.
Macaamilka waxaa si buuxda u qorey urur 14 bangi. Intaa waxaa dheer, dhowr maaliyadood iyo xisaabaadyo hoos yimaada maamulka BlackRock, Inc. ayaa galay heshiis hoosaad hoosaad dhan 300 milyan oo euro waxayna ballanqaadeen inay si buuxda u gudanayaan xuquuqdooda is-qoritaanka.
Dhammaan xubnaha Guddiga Fulinta ee Shirkadda ayaa sidoo kale ka go'an inay ka qaybqaataan kororka raasumaalka iyo inay ku dhaqmaan dhammaan xuquuqda diiwaangelinta la helay ee la xiriirta saamiyadooda si buuxda.
Kordhinta raasumaalka waxaa loola jeedaa in lagu xoojiyo booska sinnaanta Kooxda. Shirkaddu waxay u adeegsan doontaa lacagaha saafiga ah inay dib u bixiso Ka -qaybgalka Aamusan I ee Sanduuqa Xasilinta Dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Jarmalka (ESF) oo dhan 1.5 bilyan oo Euro.
Intaa waxaa sii dheer, Shirkadda waxay damacsan tahay inay si buuxda u bixiso Ka -qaybgalka Aamusan II lacag dhan 1 bilyan oo Yuuro dhammaadka 2021 sidoo kale waxay damacsan tahay inay baajiso qaddarrada aan la bixin ee Ka -qaybgalka Aamusan I dhammaadka 2021.
ESF, oo hadda haysata 15.94% raasamaalka saamiga ee Shirkadda, waxay ku dhaqaaqday inay bilawdo ka -leexinta dulsaarka shirkadda ee ugu yaraan lix bilood ka dib dhammaystirka kororka raasumaalka, haddii ESF ay iska qorto kororka raasamaalka. Dhacdadan, leexsashada waa in la dhammaystiraa ugu dambayn 24 bilood kadib xidhitaanka kororka raasamaalka, haddii ay Shirkaddu dib u bixiso Ka -qaybgalka Aamusan I iyo Ka -qaybgalka Aamusan II sidii loogu talagalay.
Soo jeedinta dadweynaha ee Saamiyada Cusub ee Jarmalka waxaa si gaar ah loo sameeyay iyada oo lagu saleynayo saadaalin dammaanad oo ay oggolaatay Hay'adda Kormeerka Maaliyadeed ee Federaalka Jarmalka (BaFin), kaas oo la heli doono, oo ay ka mid yihiin, Websaytka Kooxda Lufthansa . Oggolaanshaha waxaa la filayaa in la bixiyo Sebtember 20, 2021. Ma jiri doonto wax -bixin dadweyne oo ka baxsan Jarmalka oo rajada laga qabo haddii kale ma oggolaan doonto hay'ad kale oo sharci -dejin ah.